Madaxweyne Geelle oo Shalay soo laabtay isagoo talaabadda dhiibin ka dib markii la laga dayriyey xaal caafimaadkiisa(Sawirro) – Xeernews24
20. September 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Jabuuti (XeerNews24.com) – Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maalintii shalay ahayd kusoo laabtay dalka Jabuuti, maalmo kadib markii la faafiyey warar sheegaya inuu xanuusan yahay, kuwaas oo dowladda ay beenisay.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Jabuuti ayaa qoraal u muuqda inuu ku socday dadka faafiyey wararkaas oo uu maanta soo dhigay twitter ku yidhi “Hamiga aan ku hiigsaneyno horumarka dalkeena lama kulmi doono waxa tabar-darri ah. Waxaan madaxweynaheena u rajeyneynaa soo laabasho nabad ah.”
Toddobaadkii tagey ayaa waxaa aad ugu baahay baraha bulshada, warar sheegayey in madaxweyne Geelle “loola cararay dalka Faransiiska, oo xaaladdiisa caafimaad ay liidato.”
“Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuu wanaagsan yahay. Dhammaan wararka la wareejinayo ee ku saabsan xaaladdiisa caafimaad waa kuwa ka fog xaqiiqda,” ayuu yidhi Maxamuud Cali Yuusuf.
Wer eine Immobilie besitzt, sollte diesen genialen Rechner kennenMcMakler
Zu Besuch in der Biokräuterei Mathiasnhof in Österreichaustria.info
“Wuxuu fasax qaatay dhowr maalmood, wuxuuna marayaa tijaabooyin caafimaad oo la xidhiidha nasasho la’aan oo ah inuusan ka tegin dalka xagaagan oo dhan,” ayuu ku daray.
Wasiirka ayaa sheegay in madaxweyne Geelle uu dhowr maalmood kadib dib u billaabi doono shaqadiisa. “Ma jiraan wax gaar ah oo laga walaaco,” ayuu raaciyey.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, oo 73 jir ah ayaa Jabuuti xukumayey tan iyo sannadkii 1999-kii, waxaana bishii June ee 2021 loo doortay muddo xileedkiisii shanaad oo mucaaradku ku sheegaan sharci daro
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2021/09/Geele.jpeg 1434 1800 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2021-09-20 10:29:212021-09-20 10:29:21Madaxweyne Geelle oo Shalay soo laabtay isagoo talaabadda dhiibin ka dib markii la laga dayriyey xaal caafimaadkiisa(Sawirro)
Itoobiya: Maxay salka ku haysaa colaadda Canfarta iyo Soomaalida? Ku dhawaaqista xukunka ICJ ee Soomaaliya iyo Kenya – Tallaabooyinka xigi kara...